Mayelana NATHI - Hebei Moyo Technologies Co., Ltd.
ITHEBULA Izitezi zitholakala eShijiazhuang Economic and Technological Development Zone, esifundazweni saseHebei, eChina, esiyingini sokuthuthukiswa komnotho eBeijing-Tianjin-Hebei, esakhelene neBeijing-Guangzhou Expressway, iTianjin Port, neShijiazhuang Airport. Isikhundla sendawo siphakeme futhi ezokuthutha zilula kakhulu.
Le nkampani isebenzisa ukuhlanganiswa kwemboni kanye nezohwebo, futhi ibilokhu ikhiqiza izitezi ze-SPC kusukela ngonyaka wezi-2014. Ihlanganisa ukuthuthukiswa, ucwaningo, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwaphansi kuka-SPC. Ifektri ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-70,000, inezintambo ezi-3 ezizenzakalelayo zokukhiqiza zaseJalimane ezingenisiwe, ezinenani lonyaka lokukhipha elingamamitha-skwele ayizigidi ezingama-3.24. Imikhiqizo ithunyelwa emazweni angaphezu kuka-40 eMpumalanga Yurophu, e-United States, eMpumalanga Ephakathi, eNingizimu Melika naseNingizimu-mpumalanga Asia.
Ngokuya ngekhwalithi yomkhiqizo, inkampani ine-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, isitifiketi sehlathi le-FSC, ukuhlolwa komuntu wesithathu kokuqukethwe kwe-formaldehyde nezinye izitifiketi. Amathalente obuchwepheshe obuphambili benkampani abulawula ngokuqinile ubudlelwano kusuka ezintweni ezingavuthiwe kuya emikhiqizweni eseqedile, futhi azuze imikhiqizo esezingeni eliphakeme njengehola phambili, Qalisa isu lomkhiqizo.
Le nkampani inamathela kumbandela wokuthi "inamathela ekuphathweni kwezinga lokuqala, ikhiqize imikhiqizo esezingeni lokuqala, futhi inikeze ngezinsizakalo ezisezingeni lokuqala", ihambisane nomgwaqo wokufunda, ukuthuthukiswa kanye nokuqamba izinto ezintsha, ukuhambisana nemikhuba yezimboni zasekhaya nezangaphandle, njalo hambisana nokuthuthukiswa kobuchwepheshe bamazwe omhlaba, uthuthukise ngokuqhubekayo ikhwalithi yomkhiqizo, futhi uvuselele imiqondo yokwakhiwa. Thuthukisa uhlelo lwezinsizakalo, lwela ukuphelela nokuphelela.
Le nkampani igxile ekwakhiweni kwetshe leplastiki lamatshe laseChina, ngombono obheke phambili, umbono womhlaba wonke, kanye nomgomo wamakhasimende kuqala, ukukhuthaza ngenkuthalo ukuthuthukiswa kwemboni yaphansi yaseChina, nokunikela ngamandla ayo ekuvuseleleni izwe laseChina imikhiqizo yezimboni.
Kusukela ngo-2020, ngenxa ye-COVID-19, ukuze sisebenzele kangcono amakhasimende futhi sizuze ukuthuthuka kwebhizinisi lawo, futhi singancoma abakhiqizi bezikweletu zemikhiqizo ehlobene namakhasimende.
1. Umkhiqizi we-skirting
2. Abakhiqizi be-wallboard be-PVC
3. Ifektri yeMesh Fence
4, IVinyl Cutting Machine Factory
Ngasikhathi sinye, ukuze sikwazi ukufanisa izimpahla ezilula nezisindayo, sincoma namanye amaphephadonga wekhishi le-3D kumakhasimende, ngoba phansi kusinda kakhulu, okuzobangela imfucuza eminingi yendawo esitsheni. Uma ingathunyelwa ngephepha lodonga le-3D, ingasisebenzisa kahle isikhala sesitsha futhi igcine izindleko.
Yamukela amakhasimende avela kuwo wonke amazwe emhlabeni ukuze axoxisane ngebhizinisi. Sizosebenzisa isimo sokusebenza esisondelene kakhulu, esisebenza kahle futhi esizwakalayo ukusiza amakhasimende ukuthi andise futhi athuthukise ibhizinisi labo ukuqinisekisa ukwandiswa kwezinzuzo zamakhasimende.